Ergayga ururka Midowga Afrika ee Somalia, danjire Francisco Caetano Jose Madeira ayaa maanta si rasmi ah xilka ula wareegay, isagoo bedeli doona wakiilkii hore ee Midowga Afrika, danjire Maman S. Sidikou. “Waxaan xilka la wareegayaa iyadoo Soomaaliya ay soo martay xaalad siyaasadeed oo aad u adag iyo iyadoo la qorsheynayo...
DHaawacii Puntland ee dagaalkii G/kacyo oo ku dacdareysan Muqdisho kadib markii ay ka kala dhuunteen dawlada dhexe iyo maamulka Puntland fiiri cabasho ay muujinayaan eheladii iyo qoysaskii ay ka...
Wararka naga soo gaaraya eheladii iyo dadkii ay ka dhasheen dadkii dhaawaca ahaa ee ku dhaawacmey dagaalkii G/kacyo isla markaasna xamar loo soo qaadey ayaa cabasho ka muujinaya dar xumo daryeel la'aan ku heysata magaalada Muqdisho gaar ahaan isbitaal Digfeer oo ay maamulaan dhaqaatiir Turkish ah. Dadka dhaawaca ah ayaa...
Muqdisho oo laga hir geliyey suuq xagga internetka ah islamarkaasna wax lagu kala iibsanayo.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa looga dhawaaqay suuq loogu talo-galay in wax looga iibsado oo dhinaca Internet-ka kaasoo ay hir-gelintiisa ay iska-kaashadeen aqoonyahano Soomaaliyeed. Xafladda looga dhowaaqayey furitaanka suuqaan oo lagu qabtay Muqdisho ayaa waxaa ka qayb-galay xubno kala duwan oo isugu jiray, xubno iyo aqoon-yahanno ka tirsan ururka SOM-INDIA oo...
Ergeyga urur goboleedka IGAD Maxamed Cabdi Afeey oo sheegey in aan la joojin karin xasuuqa shabka somalia hadii aan la sameyn maxkamad.
Wakiilka IGAD ee Somalia, Maxamed Cabdi Afeey ayaa ka dhawaajiyay inuu dadaal u geli doono sidii maxkamada caalamiga ah ee ICC ay xafiis uga furan lahayd Somalia, si loo helo la xisaabtan dhab ah oo lagu sameeyo dadka dambiyada dagaal ka gala Somalia. Afeey oo wareysi siinayay BBC-da ayaa sheegay...
Muqdisho oo maanta xariga laga jarey Haamankii keydka SHidaaalka M/weyne Xasan SHeekhna waa daah furey.
Maanta ayaa waxaa dib xarigga looga jaray haamaha kaydka dhexe ee shidaalka oo ku yaalla dekedda weyn ee Muqdisho, kaasoo ay hirgeliyeen ganacsato Soomaaliyeed, waxaana haamahan xarigga ka jaray madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweyne Xasan Sheekh oo khudbad ka jeediyay munaasabadda ayaa sheegay in wax lagu farxo ay tahay...
Ciidamada Itoobiya ayaa in ka badan 409 Qof xabsiga dhigtay, markii lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen rabshadihii dhowaan ka dhacay meelo badan oo ka tirsan Gobolka Oromiya. Belene Seyoum Woldeyes, oo u hadashay xafiiska Ra’iisal Wasaaraha ayaa sheegtay in maalmaha soo socda ay sii kordhi karto tirada haatan loo...